Tsy fandriampahalemana : dahalo roa tratra sambo-belona, Jama iray maty voatifitra | NewsMada
Tsy fandriampahalemana : dahalo roa tratra sambo-belona, Jama iray maty voatifitra
Nifandona ny dahalo sy ny Jama ary ny zandary tany Ambalavao, tany Ivolo, fokontany Ankazosoaravina, kaominina Anjoma, ny alatsinainy teo, tokony ho tamin’ny 3 ora sy sasany tolakandro.
Jama iray no matin’ny dahalo tamin’izany. Nanenjika ny fokonolona sy ny dahalo, ka dahalo roa ny azo sambo-belona. Nentina niakatra tao an-tanàna ireo ka naseho vahoaka teo am-pototry ny tsangambato. Kely sisa tsy namonoan’ny fokonolona azy ireo na efa nisy aza ny nimonomonona tamin’izany.
Tafaverina avokoa ny omby 23 nangalarin’ireo dahalo.
Araka ny fanazavana ihany, nianavaratra ny dian’ireo dahalo, ka niampita ny hady ary niantso ny zandary Mahaditra ny ben’ny Tanànan’Anjoma. Raikitra ny ady tao Tsimaitohasoa Atsinanana. Tafiditra afovoany ireo dahalo ka rifatra nandositra.
Voalaza fa fiaraha-miasan’ny fokonolona teo amin’ny kaominina Anjoma sy Mahaditra, ny Jama ary ny zandary ny nahazahoana io vokatra io. Natolotra ny fampanoavana tany Fianarantsoa ireo roa lahy ireo, omaly.
Telo lahy tratra tany Kiranomena
Dahalo telo lahy koa no voasambotry ny miaramila tany Kiranomena, omaly.
Raha ny vaovao voaray, fantatra fa zanak’olona avy any Kiranomena ihany ny roa tamin’izy ireo. Nilaza fa nikasa haka omby teo amin’ny manodidina ka nifanehatra tamina miaramila ary tratra avy hatrany.
Mitohy hatrany ny ady amin’ny asan-dahalo any amin’ny faritra. Mivory amin’izao fotoana izao ny lehiben’ny zandary ka anisan’ny lohalaharana amin’ny ady hevitra ny ady amin’ny asan-dahalo sy ny tsy fandriampahalemana amin’ny ankapobeny. Miandry izay vokatry ny fivoriana izay ny rehetra.